Xulka Belgium oo laga saari la’yahay kaalinta koowaad qiimeynta billaha xulalka adduunka ee FIFA… (Kaalintee ayay ku jiraan xulkeenna Soomaaliya iyo dalalka la jaarka ah?) – Gool FM
Xulka Belgium oo laga saari la’yahay kaalinta koowaad qiimeynta billaha xulalka adduunka ee FIFA… (Kaalintee ayay ku jiraan xulkeenna Soomaaliya iyo dalalka la jaarka ah?)
Haaruun October 26, 2019
(World) 26 Okt 2019. Xiriirka kubadda cagta Adduunka ee FIFA ayaa shaaciyey qiimeynta billaha ah ee kala sarreynta xulalka Adduunka, waxaana kaalinta koowaad ka soo muuqday xulka qaranka Belgium.
Xulka qaranka England ay isaguna ku jira kaalinta afaraad oo uusan isbedel ku dhicin, Portugal ayaa ku jira kaalinta afaraad hal boos hoos uga dhacay waxaana uu ka soo muuqday kaalinta shanaad.
Uruguay oo horumar sameeyey ayaa soo tiigsaday kaalinta afaraad ee qiimeynta billaha FIFA, halka xulkii gaartay afar dhammaadka Koobkii Adduunka 2018 ee Croatia ay hoos ugu dhaceen kaalinta todobaad.
Xulka Spain ayaa ku jira kaalinta 8-aad, halka Argentina ayaa ku jiraan kaalinta sagaalaad.
Dhanka kale xulkeenna Soomaaliya ayaa horumar ballaaran sameeyey waxaana uu soo galay kaalinta198-aad, isagoo muddo badan ku jiray kaalinta 202-aad iyo wixii ka hooseeya, iyadoo xulka Eritrea uu ka soo muuqday 206-aad.
Xulka Jabuuti ayaa 10 darajo sare u kac sameeyey waxaana uu ka soo muuqday kaalinta 185-aad, xulka Kenya uu joogo kaalinta 108, Ethiopia ayaana ku jira 151-aad.
RASMI: Neymar & Vinicius oo ka maqan liiska xulka qaranka Brazil ee wajahaya Argentina… (Yaa kale oo liiskan ku soo baxay?)
Chelsea oo diyaar u ah inay dalab ka gudbiso bisha Janaayo Weeraryahan ka tirsan kooxda AC Milan haddii…